Reysal Wasaare Kheyre: Xoosh waxa uu tusaale u ahaa dowladnimada Soomaaliya – Kalfadhi
Reysal Wasaare Kheyre: Xoosh waxa uu tusaale u ahaa dowladnimada Soomaaliya
Aas Qaran, oo uu ka soo qeybgalay Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, Wasiiro, Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi, Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka iyo qeybo kale oo bulshada ka mid ah ayaa Wasiirkii hore ee Dastuurka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil, oo isagoo xilkaas haaya ku geeriyooday maalin ka hor Dubaay, Isutaga Imaaraadka Carabta, waxaa maanta loogu sameeyey Muqdisho.
Waxaa lagu aasay Qabuuraha Isbitaal Madiina. Kasoo-qeybgalayaasha aaskiisa qaran waxay intooda badan ku hagoogeen marxuumka ammaan iyo bogaadin. Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Kheyre, ayaa sheegay inuu, Allaha u naxariistee, Xoosh u ahaa tusaale wax kasta oo Dowladnimada Soomaaliya kaalmeynayey intii uu isaga u ahaa Wasiirka Dastuurka.
Meydka Marxuum Xoosh, Wasiirkii hore ee Dastuurka, oo Janaaso lagu tukanayo
“Dalkaan waxaan ka raadineyno waxay tahay in la xoojiyo midnimada iyo xoriyadda ummadda Soomaaliyeed, Cabdiraxmaan baa tusaale u ahaa” ayuu yiri Reysal Wasaare Kheyre. “Dalkaan waxaan u taaganahay, oo aan habeen walba u soo jeednaa in qabyaaladda qarannimo lagu beddelo, Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil baa tusaale u ahaa” ayuu hadalkiisa raaciyey.
“Dalkaan waxaan ka shaqeynaa in shruucda Soomaaliyeed sareynteeda laga shaqeeyo, Cabdiraxmaan baa aasaas u ahaa” ayuu sidoo kale yiri Kheyre. “Dalkaan waxaan ka shaqeynaa in dastuurkiisa la dhameystiro, isagaa ahaa aabihii shaqadaas haayey” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Kheyre waxa uu sheegay in farriintii ugu dambeysay ee uu u soo diro, Allaha u naxariistee Xoosh, ay ahayd qudbad uu jeediyey Madaxweyne Mareykan ah, kaas oo uu sheegay in dal kasta oo aad iska dhiibto ama aad ku noolaato uusan dalkaaga ahaan doonin, dadna aadan u noqon doonin. “Marka ugu dambeeya wadankaaga ayaa waxa uu ahaanaayaa wadanka lagaa rabo in aad wadan ka dhigatid” ayuu yiri Reysal Wasaaraha dalka, Xasan Cali Kheyre.
Qabriga Marxuum Xoosh, Wasiirkii Dastuurka, oo lagu hareereysan yahay, si loogu duceeyo
Guddoomiyaha Guddiga Dib-u-eegista iyo Lasocodka Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Sanatar Cabdi Xasan Cawaale (Qeyb-diid), ayaa sheegay inuu Marxuum Xoosh u ahaa Guddigooda laf-dhabar, ayna tabi doonaan. “Bahda Dib-u-eegista Dastuurku(na) waxay tabi doonaan, runtii, kaalin muhiim ah oo uu ku lahaa sameynta iyo dib-u-eegista dastuurka intaba” ayuu yiri Sanatar Cabdi Qeyb-diid.
Warbaahinta ayaa isku dayeysay iney mid mid u wareysato dhamaan wakiillada iyo madaxda aaska isugu tagtay, kuwaas oo iyaguna ka faalloonaya samaha marxuumka iyo taariikhda shaqadiisa, iyagoo ay qaarkood sheegeen inuu Xoosh ka hayey Soomaaliya shaqo cilmi ahaan, xirfad ahaan iyo faham ahaan uu aad u yaqiinay. Waxay dhamaantood ugu duceeyeen naxariis Alle.
Xildhibaanno ka difaacay Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sh. Axmed warbixin dhaliileysay